यस्तो छ सजिलै बााख्रापालन गर्न सकिने उपाएहरु .. « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
बिना अ’पराध ४३ वर्ष जेल हालिएका निर्दोषले न्याय पाए, १९ करोड रुपैयाँ चन्दा उठाएर सहयोग
१३ मंसिर २०७८, सोमबार १२:१२
विभिन्न देशले प्रतिबन्ध लगाएपछि दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपतिले भने– “हामीमाथि विभेद भयो”
१३ मंसिर २०७८, सोमबार १२:०७
निमोनियाबाट छुटकारा पाउन अपनाउनुहोस् यस्ता उपाय
१३ मंसिर २०७८, सोमबार १२:००
माओवादी नेता पुनको स्वास्थ्यमा सुधार
१३ मंसिर २०७८, सोमबार १०:५७
१२ नेपाली महिलालाई केन्यामा बेच्ने क्यानाडेली व्यवसायीलाई ३० वर्ष जेल सजाय
१३ मंसिर २०७८, सोमबार १०:५०
ओलीले दर्ता गराए अध्यक्षमा उम्मेदवारी
१३ मंसिर २०७८, सोमबार १०:२६
यस्तो छ सजिलै बााख्रापालन गर्न सकिने उपाएहरु ..
२३ माघ २०७५, बुधबार १०:२९ मा प्रकाशित
परिचय : बाख्रा पालन प्राय सबै जलवायुमा कम लागत साधारण खोर गोड सामान्य हेरचाह तथा पालन पोषणवाट गर्न सकिन्छ । यसका उत्पादन विक्रिका लागि सर्वसुलभ उपलब्ध छ । यिनै कारणले पनि पशुधनमा वाख्रा प्रजाती को विशेष महत्व छ । उपरोक्त विशेष गुणहरु भएका कारण महात्मा गान्धीले बाख्रालाई गरीबको गाई भन्थे । आजको परिवेशमा पनि यो कथन महत्वपूर्ण छ । आज जव एक तीर पशुहरुको दाना आहार औषधि उपचार महँगो हुनाले पशुपालन आर्थीक दृष्टिले कम लाभकारी हुँदैछ भने बाख्रा पालन कम लागत सामान्य हेरचाह गर्दा पुग्ने भएकाले सिमान्तकृत गरीव किसान मजदुरका लागि जीवीको पार्जन को एउटा साधन बनेको छ । यति मात्र नभएर यसबाट हुन आयले गर्दा समाजमा आर्थिक रुपले सम्पन्न समुदायलाई पनि आफुतिर आकर्षित गर्देछ । जसका कारण बाख्रा पालन स्वरोजगारको एउटा प्रवल भरपर्दो साधन बन्दैछ ।
बाख्रापालनको उपयोगिता :
बाखा्रा पालन खास गरी मासु दुध एवं गै पस्मीना एवं मोहेरको लागि गरीन्छ । यसका साथै यीनको मलमुत्र ले जमीनको उर्वरा शक्ति बढदछ । बाख्राहरु प्रायः चरी चरामा निर्भर हुन्छन । यिनीहरु भmाडी, जंगली घाँसपात रुखका पात डाले घाँस खाएर हामीलाई पौष्टीक पर्दाथ मासु दुध उपलब्ध गराँउछन । बाख्राका प्रमुख उपयोगी जातहरु : ब्लैक बंगाल, यस जातका बाख्राहरु पश्चिम बंगाल झारखण्ड असीम उडीसामा पाइन्छन । यीनको शरीरम कालो खैरौ, तथा सेतो रंगको साना रौ पाइन्छ । तर करीव ८०% प्रतिशत बाख्राहरुमा भने रौ कालो हुन्छ । यो सानो जीड डालको हुन्छ, वयस्के खसी के का को तौल करीव १८—२० किलो हुन्छ भने वाख्रीको तौल १५—१८ किलो ग्राम हुन्छ ।
जर तथा मादा दुबैमा ३—४ इन्च अघिलतिर सिधा निकलेको सींग हुन्छ । यसको शरीर कस्सीएको हुनुका साथै अगाडी भन्दा पछाडी तीर बढि चौडा तथा बीचमा बढी मोटो हुन्छ । यसको कान सानो तीखो अनी अगाडी पट्टी निकलिएको हुन्छ । यस जातको प्रजनन क्षमता धेरै राम्रो छ । औसतन यसले २ बर्षमा ३ पटक पाठापाठी जन्माउँछ तथा एक बेतमा २—३ पाठापाठी जन्माउँछ । केही बाख्राले एक बर्षमा २ पटक पाढापाढी दिन्छन । यस जातको पाढीहरु ८—१० महिनामा कोरेली अवस्थामा पुग्दछन तथा औसत १५—१६ महिनाको उमेर पहिलो पटक पाठापाठी जन्माउन्छन ।
जमुना पारीः अन्य जातका वाख्राहरु भन्दा यो सवै भन्दा अग्लो तथा लामो जीउ डालको बाख्रा मरीन्छ । यो भारतको उत्तर प्रदेशको इटावा जिल्ला संग गंगा यमुना तथा चवल नदिहरुलृ घेरिएको क्षेत्रमा पाइन्छ । साँग्लो नवीयन बाख्राहरुको विकासमा जमुना पारी जातको विशेष योगदान रहेको छ । यिनको नाक धेरै उठेको हुन्छ । जसलाई रोमन नोज भनिन्छ । यसको संग सानो तथा चौडा हुन्छ काम १०( १२ इन्च लामो चौडा मोडिएको तथा झुन्डिएको हुन्छ । यसको तीघ्राको पछाडी पट्टी धेरै लामो रौ हुन्छ । यसको शरीरमा सेतो तथा रातो रौ हुन्छ । यसको शरीर वेलुन आकारको हुन्छ । व्यस्क नरको औसत तौल ५०—६० किलो ग्राम हुन्छ । यसको जन्मिने बेला ५—५—३ किलो ग्राम तौलका हुन्छन । यस जातको वाख्राले प्रतिदिन औसत १.५—२.० किलो ग्राम दुध दिइन्छ । । यस प्रजातीका बाख्रा दुध उत्पादनका लागि पाल्न उपयुक्त हुन्छन । बाख्रीहरुले बर्षेनी पाठापाठी जन्माउछन । यस जातका बाख्राहरुको मुख्य रुपमा झाडी बुटयान एवं रुख डाले घाँसका पात स्याउलामे निर्भर हुन्छन । जमुनापारी प्रजातीको बोकाहरु विभिन्न जलवायुमा पाइने स्थानीय जातका बाख्राहरुको नश्ल सुधारको लागि प्रयोग गराइन्छ ।
बीटलः यो प्रजातीकाृ बाख्राहरु मुख्यतः भारतको पंजाव प्रान्तको गुरुदासपुर जिल्लाको बटाला अनुमंडलमा पाइन्छ ,यसको शरीर खैरौ रंगमा सेतो सेतो थोप्ला वा कालो रंगमा सेतो सेतो थोप्ला भएको हुन्छ । यो बाख्रा हेर्दा जमुनापारी जस्तै हुन्छ तर यसको उचाई लम्वाई जमुनापारीको भन्दा सानो हुन्छ । नाक उठेको हुन्छ । कानको लम्वाई र नाकको उचाई जमुनापारी भन्दा कम हुन्छ । सींज नाहीर तथा पछाडी पट्टी घुमेको हुन्छ । व्यस्क खसीबोकाको तौल ५५ —६५ किलो ग्राम तथा बाख्रीकोबब ४४—४५ किलो ग्राम हुन्छ ।
यसका पाठा पाठी जन्मने बेलामा २.५—३० किलो ग्राम तौलका हुन्छन । तीघ्राको पछाडी भागमा कम वाक्लो रौ हुन्छ । यस जातका वाख्राले सालातमा पाठी जन्माउछन तथा ६० प्रतिशतले एउटा मात्र पाठा पाठी जन्माउछन् । यस प्रजातीका बोकाहरु अन्य साना तथा मझौला आकारका स्थानीय प्रजातीका बाख्राहरुको नश्ल सुधार गर्न प्रयोग गराइन्छ । बीटल प्रजातीका बाख्रा सबै खाले जलवायु क्षेत्रकालागि उपयुक्त मानिन्छ । कुनै दुइजात का बोका तथा बाख्राको संयोगले उत्पन्न बाख्रालाई बर्णशंकर वाख्रा भनिन्छ । विरलजातको संयोगले उत्पादित पाठा को तौल ६ महिनामा १२—१५ किलो ग्राम हुन्छ ।
जवकी स्थानीय प्रजातीको बोकाले बालीको लागि जन्मेको पाठाको तौल ७—८ किलो ग्राम मात्र हुन्छ । यस प्रकारले बाख्रा पालनवाट हुने आयमा डेढ देखि दुइगुण बृद्धि सम्भव हुन सक्छ । बर्णशंकर बाख्र्राहरुको दुध उत्पादन क्षमता स्थानीय वाख्रा भन्दा तीन गुण बढी हुन्छ । यदि शारीरिक वजन ठिक भएको अवश्यमा पाठीलाई ८—१० महिनामा वोका लगाइ बाली लगाउनन सकिन्छ । अन्य १२ महिनाको उमेश पुगे पछि पाठीमा भृतुचक्र एवं कृतुकाल छोटाृ हुन्छ । त्यसो त बाख्रीमा त्रृतांचक्र करीब १८—२० दिनको एवं ऋृतुकाल ३६ घण्टाको हुने गर्दछ । बाख्रीहरु बर्षेभरी बाली खोज्दछन तर प्रायः जसो बाख्रीहरु मध्ये असोज कार्तिक र मध्य बैशाखमा गर्भाधारण गर्दछन । ऋतुकाल शुरु भएका १०—१२ र २४— ३६ घण्टाको बीचमा २ पटक वोका लगाएर बाली लगाउँदा गर्भ रहने सम्भावना ९० प्रतिशत हुन्छ । यदि वाख्रा पाठीले विहान बोका संग बाली लगाउनु पर्दछ । यदि साँझ वाली खोजे अर्को दिन विहान र साँझवाली लगाउनु उचीत हुन्छ ।
गर्भवती वाख्राको हेरचाह :
गर्भवती बाख्रीलाई गर्भाश्यको अन्तिम डेढ महिनामा अधिक सुपाच्च एवं पौष्टिक भोजनको आवश्यकता पर्दछ । किनभने यसको पेटमा हुर्की रहेको भ्रणको विकास धेरै तीव्र हुने गर्दछ । यस वेला गर्भवती बाख्रीको पोषण तथा हेरचाहमा ध्यान दिइएमा स्वास्थय पाठापाठीको शारिरीक विकास राम्रो हुन्छ । वाख्रीहरुको गर्भावस्था औसतन १४२ —१४८ दिन को हुन्छ । ल्याउने २—३ अगावै बाख्रीलाई सफा सुग्धर ठाउँमा बथानका अरु बाख्री भन्दा वेग्लै राख्नु पर्दछ । मौसमी वातावरण अनुसार खोर गोठको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । वाख्रालाई गर्मी जाडो बर्षात तथा जंगली जनावरबाट बचाउने योग्य खोर गोठ आवश्यक पर्छ । खोर गोठको लागि सस्तो भन्दा सस्तो सामग्री प्रयोग गर्नुपर्छ । ताकी गोठको लागत कम परोसा प्रत्येक व्यस्क वाख्राको लागि १०—१२ बर्ग फिट जमीन आवश्यक पर्दछ । बाख्रा र खसीको बोकालाई बेग्लै राख्नु पर्दछ । बाख्रालाई खोर गोठकाृ वरीपरि किनारै किनार डेढ फिट अगला अढाई देखि ३ फिट चौडाई मचान वनाउनु पर्छ ।मचान वनाउँदा काठको ‘फल्याक या वाँसको पातो ओछयाउदा भुइमा यती ठूलो जान्नु नहोस जसमा बाख्रा पाठापाठीको खुट्टा नउठोस पौषण बाख्राहरु चर्ने बाहेक हरियो स्याउला हरियो घाँस दालको भुस ठुटो चोकर आदी मन पराउँछन । बाख्रालाई प्रतिदिन ६—८ घण्टा चराउनु पर्दछ । यदी बाख्रालाई प्रतिदिन ६—८ घण्टा चराउनु पर्दछ ।यदि बाख्रालाई बाँधेर पाल्ने हो भने दिनमा २ पटक घाँस स्याउला दाना पानी दिनु पर्दछ । वाख्राले हरियो घाँस लहसुन बरसीम, गेहुँ, मकै, नेपीयद स्याउला ववुल वयर वकाइनो पिपल वर गुलर कटहल कोइरालो इपिल इपिइल खाने गर्दछन । एउटा व्यस्क वाख्रालाई औसतन एक केजी घास या स्याउला तथा १००— २५० ग्राम दानाको मिश्रण मकैको च्याख्ला चोकर पिना नुन मिसाएर दिन सकिन्छ । उमेर र तौल अनुसार भोजनको मात्रा बढाया या घटाया जा सकता है बोका सुत्केरी, पाठापाठीलाई दुध चुसाउने मात्र गर्भवती वाख्रीको पोषण व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक पर्छ ।
बाख्रालाई लगाउने प्रमुख रोगहरु :—
परजीवी रोग, सर्दी जुकाम निमोनिया,छेर्ने रोग, खोरेन भ्यागुते, छ मासृ इन्टेरोटोक्सीमिया, पेट फुल्ने जोन्स रोग,थुनेली, कक्सीडियोसीस, कन्टेजीयस इकथाइमा (वर्फ) यीनवाट वच्न दक्ष विज्ञ पशुचिकित्सकको सल्लाहमा वेला वेलामा उचीत आवश्यक प्रयोगशाला परिक्षण पछि आवश्यक औषधि उपचार गराउने ।
बाख्रा पालन संग सम्बनिधत आवश्यक कुराहरु :-
— स्थानीय रैयाने कहि वाख्रालाई, वीटल सीसेही जमुनापारी वारवेरीको व्याड वोका संग प्रजनन गराउने ।
— पाठीलाई वाली पहिलो पटक ८—१० महिना मा लगाउने ।
— भिन्न वर्ण शंकरका पाठी वाख्रीलाई भिन्न बर्ण शंकरको बोका संग वाली लगाउने
— बोका र बाख्रीको बीच हाडनाता पर्नु हुँदैन ।
— बथानको बोका वाख्रालाई वेग्ला वेग्लै खीरमा राख्नु पर्छ ।
— पाठी वाख्रीलाई बोका खोजेको १०—१२ एवं २४—३६ घण्टाको वीचमा २ पटक वाली लगाउने
— ल्याएको ३० दिन पछि मात्र वोकाको वाली लगाउने ।
— गर्भीणी अवस्थाको अन्तिम डेढ महिना बाख्रा लाई चराउन बाहेक अतिरिक्त कम्तिमा २०० ग्राम दानाको मिश्रण अनिवार्य दिने ।
— वाख्राको खोर गोठमा प्रति बाख्रा १०—१२ बर्ग फिट ठाउ हुनु पर्छ साथै एउटा बथानमा एक पटकमा २० भन्दा बढि बाख्रा न राख्ने ।
— ल्याउने बेलाका वाख्रालाई सफा सुगधर पसलको सोतर ओछयाएको ठाउँमा राख्ने
— बच्चा जन्माउने बेला माउ बाख्रालाई मदतको आवश्यकता परे सावुनले हाथ धोएर मात्र गर्ने
— पाठापाठी जन्म पछि नाइटोको साल नाल र ३ इन्च तलवाट नयाँ व्रेडले काटी बाँच्ची डिटो आयोडिन वा वोकाडी नले सफा गर्ने यो औषधि नियमित ३ दिन सम्म दिने ।
— बाख्रा खास सगरी पाठापाठीलाई चिसोबाट बचाउने
— पाठापाठीलाई माउ संगै राख्ने रातीको वेला कोठामा राख्ने
— व्याडलाई न चाहिने पाठालाई २ महिनाको उमेरमा बन्ध्याकरण गर्ने ।
— बाख्राको खोर गोठ सफा सुग्धर अनि हावादार हुनुपर्छ ।
— सम्भव भए वाख्रा पाठा पाठी लाई खोर भित्र डाँढ मचान वनाएर राख्ने ।
— पाठा पाठीलाई निमोनियाँवाट वचाउन वेला वेलामा टेट्रा साइकलिन पानीमा हालेर दिने ।
— पाठा पाठीलाई कमसीडि सोयोसको औषधी वेला वेलामा दिने
— तीन महिना भन्दा माथीका पाठापाठी वाख्रालाई इन्टेरो टकर्सी मियाको खोप अनिवार्य दिने
— वाखा्राको वथानलाई वेलावेलामा परजीवि नियन्त्रण गर्ने औषधि दिने र
— वाह परजीवि लुत्ताृ किर्जा उपीया वाट वचाउन आवश्यक औषधि मिसाएको झोलमा डिप्रिष्ण गरउने वेलावेलामा
— उमेर तालिका अनुसार पि.पि.आर लगायत अन्य वाख्रा पालन क्षेत्रमा नियमित राख्ने अभिलेख संक्रामक सरुवा रोगको खोप दिने
— वाख्रा विरामी विज्ञ पशुचिकित्सक संग सल्लाह गरी औषधि उपचार गर्ने
— खसीको तौल १५ केजी भए पछि मासुको लागि प्रयोग गर्ने ।
— पाठा पाठी ९— १० महिना भएपछि छनौट विक्री गर्ने ।
कच्चा तेलको मूल्य घट्दै
बढ्याे सुनकाे मूल्य, ताेलाकाे कति ?
देउखुरीमा बन्दै गरेको प्रदेशसभा भवनको लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख घर्तीद्वारा निरीक्षण
ईटाको मूल्य २५ रुपैयाँसम्म पुग्यो
एकैदिन १६ सयले घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ?
सुनचाँदीकै मूल्य बढ्यो, कतिमा हुँदै छ कारोबार ?
+977 01 4987443, 9844911644